Boqolaal Baan Dilay Been ah iyo Mayd ka Bood-Bood Alle Magane na Bixinmayso – Rasaasa News
Nov 13, 2009 Jwxo, Jwxo-shiilo, Kilal5
Eebe wayne dadka wuxuu xayawaanka kale kaga sharfay, waa garashada uu xaywaanka dheer yahay ee uu ku kala garto wanaaga iyo xumaanta, hadii uusan dadku kala garan karin xumaanta iyo wanaaga ma uusan maamuleen aduunkan aan maanta aragno, Jwxo-shiil, caqligiigu waa dhibaataynata Ogadeeniya.
Itobiya waxay samaysay ciidan Somali ah oo aad u lixaad badan oo xidhan dirsay ciidan, wata gaadiid dagaal, mushaarana qaata, oo ay ugu talo gashay in ay la dagaalama Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] waxaa in muddo ahba soo food saartay burbur ay ugu wacan tahay siyaasad xumo iyo cadaawad ka dhax jirta ururka dhexdiisa arintaas oo keentay in ay dadweynihii taageeri jiray ay kalsoonidii kala noqdaan.
Labada ciidan Jwxo iyo New Police, waxay ka soo jeedaan hal qoys oo Somali ah, waxayna u badan yihiin rag hore loogu soo tabobaray dalka Eritrea. Intii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya labadan ciidan waxaa ku naf waayey rag aad u badan oo qaali ah, waxaana ku agoontoobay caruur badan, hooyo iyo aabe badan ayaa waxay waayeen wiilal ay soo korinayeen xili dheer.
Waxaa uu la mid noqday dagaalka Maanta ka jira dhulka Somalida Ogadeeniya midkii ka jiri jiray dalka Nepal oo ay labo walalo ah oo guri wada jooga ay maalintiina duurka isku dilaan habeenkiina guriga Aabo iyo Hooyo u soo wada hoydaan, arintaas oo ay ka dambeeyeen shiinaha iyo Maraykanku, sidaas si la mid ah waxay labada xukuumadood ee Eritrea iyo Ethiopia ay u tashadeen dabar goynta Somalida Ogadeeniya iyaga oo isticmaalaya, dad ogaden ah oo aan garasho lahayn.
Waxaa maanta Baadiyaha dhulka Somalida Ogadeeniya wada jooga labad ciidan Jwxo iyo New Police oo wada dhashay, waxayna ka biya cabaan hal reer oo ay habeenkii u wada hoydaan maalintiina duurka ayaa la isku dilaa. Waxaa kale oo uu mid walbiba dilaa odayaasha ama dhalinyarada ay habeenkii la sheekaystaan, waayo waxaa had iyo goorba soo noq noqda sheekooyinkooda dadkuna way ku wareeraan dabadeedna waxay garan waayaan kuwa ay u sheekaynayaan.
Sida ka dhacday maalintii talaadada ahayd Degmada Xamaro, oo sida la sheegay lagu dilay 40 nin oo hal reer ah oo ka tirsanaa ciidanka Jwxo, ka dib kolkii ay soo sheegeen rag iyaga ka tirsanaa dabadeedna uusan ninba ka bixin.
Dhibaatada ugu weyn ee haysata Jwxo, waxaa weeyey qaybsanaan dhexdooda ah oo uu ugu wacan yahay Jwxo-shiil, dibad iyo gudaba waxaan wada tashan karin odayaasha iyo aqoon yahanka ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya si ay ku dhacdayba. Waxaana la leeyahay arintaas waxaa masuul ka ah Jwxo-shiil, waayo waxaa uu umada u qaybiyey beel beel aan is aamini karin lagama yaabo marnaba in ay timaado wada tashi inta uu Jwxo-shiil nool yahay.
Waxaa bil walba soo xarooda kooxo ka tirsan ururka Jwxo, ka dibna waxay dib u basaasaan saaxiibadoodii ay duurka kaga yimaadeen, waxaana jira wax ku kalifaya in ay sidaas sameeyaan, laakiin cidiba ma waydiiso, na tusa kuwii kale mooyee.
Waxaa kale oo aan iyana haba yaraatee wax xigmada ah ayna ku jirin oo aad uga fog bini,aadamnimada kuwa amara New Police -ka, waayo waxaa wax laga xishoodo ah waxyaabaha aadaminimada ka baxsan ee ay sameeyaan kolka ay dilaan xubno ka tirsan Jwxo.
Waxaanan waligay arag mayd inta la dilay waliba laga bood-boodayo oo ciyaar lagu kor tumanayo, waxaan u malaynayaa ciidanka New Police-ku way cunaan mayka dadka ay dilaan. Waxaase cid walba ka damiir xun ruuxa soo galinaya bogga caalmaka oo dhan laga daawanayo, ma garanayo ruuxa waxaas samaynaya wax alaale wax aan ku sifeeyo dhurwaa mooyee.
Hadii ayna ummada Ogadeeniya iyo wax garadkeedu si deg deg ah wax uga qabanin arimahan ku socda reerka Ogadeen, waxaa dhab ah oo aan saadaalin ahayn in ay noqon doonto oday ka sheekee iyo dadka ugu tirada yar ee dega dhulka Somalida Ogadeeniya.